बा’घको मु’खबाट छो’रीलाई ‘बचाउने महान आमा । कसरी बचाईन त ? हेर्नुहोस् (भिडियो) – Khabaarpati
December 25, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on बा’घको मु’खबाट छो’रीलाई ‘बचाउने महान आमा । कसरी बचाईन त ? हेर्नुहोस् (भिडियो)
करोडौंले हरेको गीत गाएकी यति राम्री गायिका रुदै मिडियामा । ‘गीत गाउन दिन्छु भनेर यस्तो गरे’ भन्दै भक्कानिईन् (भिडियो हेर्नुस)